Issued on: 16/10/2009 - 13:18 Modified: 17/10/2009 - 10:43
Prime Minister Morgan Tsvangirai (photo) says his Movement for Democratic Change will boycott Zimbabwe's national unity government, calling President Robert Mugabe's ZANU-PF party "dishonest and unreliable".
AFP - Zimbabwe's opposition MDC will boycott the country's power-sharing government until all sticking points have been resolved and a political deal is reached, Prime Minister Morgan Tsvangirai said on Friday.
Tsvangirai said his Movement for Democratic Change would disengage from President Robert Mugabe's "dishonest and unreliable" ZANU-PF party in the country's unity cabinet set up in February.
"It is our right to disengage from a dishonest and unreliable partner. In this regard, whilst being in government we shall forthwith disengage from ZANU-PF and in particular from cabinet and the council of ministers until such time as confidence and respect are restored amongst us," Tsvangirai toldreporters.
The fresh crisis in Zimbabwe comes after a court this week ordered the prison detention of Roy Bennett, a senior MDC official, and ruled that he should stand trial on terrorism charges.